MTK, Author at Kingdom of news | Page 23 of 24
unicode Gene Deitch သည်ဧပြီလ ၁၆ရက်နေ့ ၂၀၂၀တွင် သူ၏ တိုက်ခန်းတွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု Czech သတင်းထောက်တစ်ဦးထံမှသိရှိရသည်။ သူသည် ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတိုအကယ်ဒမီဆုကို ၁၉၆၀ တွင်ရရှိခဲ့သည်။ Gene ဖန်တီးခဲ့သော animation ကာတွန်းများမှာ နာမည်ကြီးကာတွန်းများဖြစ်သည့် Tom...
unicode COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၂:၀၀) နာရီ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအရ စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ...
Cristiano Ronaldo ရဲ့6pack abs ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း Challengeမှာတော့ သူသည်၄၅ စက္ကန့်အတွင်း ခြေထောက်ကိုမြောက်ထားပြီး လက်နှင့် ၁၄၂ကြိမ်ထိပြထား
unicode Stay home ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိစေရန် သည် challenge video တစ်ခုကိုတင်ခဲ့သည်။ သူသည် abs လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ခြေကိုမြောက်ကာ လက်နှင့်ထိပြခြင်းကို ၄၅စက္ကန့်အတွင်း ၁၄၂ကြိမ်လုပ်ထားခဲ့သည့်အတွက် ၁စက္ကန့်လျှင် ၃ကြိမ်နှုန်းဖြင့် စံချိန်ရရှိထားသည်။ အခြားဘယ်သူတွေ...
Myanmar Thingyan Festival (New year festival)
There are many festival in Myanmar. One of the most famous festival is Thingyan (New year festival). Thingyan festival is...